Ukwehla Kwezintambo - Ukuzivocavoca Okuyisisekelo Okufanele Ukwazi | Bezzia
USusana godoy | 14/09/2021 16:00 | Ukuzivocavoca
Namuhla ngaphezu kokuqeqeshwa kukodwa, sizozivumela sithathwe ngochungechunge lwe ukuzivocavoca intamo noma ukuzelula. Ngoba njengoba sazi kahle, kungenye yezindawo eziyinkimbinkimbi kakhulu, ezingathwala kanzima. Ubuhlungu bezintamo noma isiyezi ngenxa yalesi sizathu ukuhleleka kosuku ezimpilweni zethu.
Ngakho-ke, uma kusezandleni zethu ukukuvikela noma ukuzithuthukisa, akukho okungcono. Ngakho-ke, kufanele sikhumbule ukuthi zikhona uchungechunge lokuzivocavoca lapho sizokwazi khona ukukhulula intamo ngaphezulu. Njengoba ezinye izinkinga zomlomo wesibeletho zihlobene nezinkontileka. Sizoqala?
1 Intambo ye-lateral iyelula
2 Ikhanda elibushelelezi liyajika
3 Welula intamo namathinki esilevu
4 Umgogodla nawo udinga ukwelulwa
Intambo ye-lateral iyelula
Lokhu kuvivinya umzimba kungenye yezinto ezaziwa kakhulu futhi ngaphezu kwalokho, singakuthola futhi ngezindlela ezahlukahlukene. Omunye wabo ukuthi singakwenza sihleli, sishiya izingalo phansi namahlombe futhi. Uma senza amandla amancane kuzo zombili izindawo, kungcono. Ngaleso sikhathi kufanele utshekise intamo yakho eceleni, kube sengathi indlebe yakho ifuna ukuthinta ihlombe. Kubalulekile ukuthi ungalokothi uziphoqe nokuthi uzivocavoca ngobumnene. Uzokwenza ohlangothini lwesokudla bese ngakwesobunxele noma okuphambene nalokho.
Kunjalo Okunye okuhlukile kwalokhu kunwebeka kwentamo ukukwenza ngosizo lwesandla. Esikhundleni sokushiya izingalo phansi, sibamba ikhanda ngesandla sibheke ohlangothini lapho sifuna ukwelula khona. Ngemuva kwalokho sizohlala imizuzwana embalwa kanjena ukushintshela kolunye uhlangothi. Ungasebenzisi ingcindezi eningi ngesandla sakho, kuyasiza nje.
Ikhanda elibushelelezi liyajika
Singaphinda sishintshe izivivinyo noma ukwelula intamo engenhla ngalena. Kuyinto elula kunazo zonke ngoba unenketho yokukwazi ukukwenza kokubili ukuhlala nokuma. Kuzona zozimbili izimo, indawo yokuqala iyafana ngoba nathi sidinga ukuba nezingalo zethu phansi namahlombe ethu. Uma usulungile, sekuyisikhathi sokunqekuzisa ikhanda. Lokho wukuthi, sizophendukela kolunye uhlangothi bese siye kolunye. Konke lokhu ngendlela ehamba kancane yokugwema isiyezi esingadingeki. Kuyindlela ephelele yokusebenzisa imisipha yendawo ye-trapezius.
Welula intamo namathinki esilevu
Kungancipha kanjani, sibhekene nokunye kokuzivocavoca okulula ukukwenza. Imayelana nokugcina umzimba uqonde, okusho ukuthi, ingxenye yesifuba ayikwazi ukunyakaza. Ukusuka lapho, okuzonyakaza yintamo nesilevu. Ngoba sizokwenza ukunyakaza kwentamo phambili. Sicabanga ukuthi sinentamo yenjoloba futhi sifuna ukuyelulela kude kakhulu ngangokunokwenzeka, kodwa hhayi phansi. Qaphela ukuthi ungahambisi wonke umzimba. Lapho sesiyelulile, sekuyisikhathi sokucosha leyo ntamo futhi sizoyenza sibheke emuva sivumele isilevu sinamathele kuyo ngokuphelele.
Umgogodla nawo udinga ukwelulwa
Yize sigxile engxenyeni yentamo, kuyiqiniso ukuthi umgogodla nawo ubumbene futhi udinga ukuthi siwubheke. Kunokuzivocavoca okuningi esingamenzela kona, kepha kulokhu esizozama ukuthi ukunyakaza kubumbene futhi kwenzelwe nentamo yethu. Ngakho-ke, kufanele uqonde ngokuphelele. Ngamanye amagama, sengathi intambo ibidonsela ikhanda lakho phezulu kuwe. Kulokhu sidinga welula emuva nentamo kodwa konke ngaphandle kokuphoqa, yize ngokwengeziwe singenza kangcono. Ngemuva kwalokho siyakhululeka bese sibuyela endaweni yokuqala. Intamo izohamba iqonde futhi ngalokho, isilevu sehla kancane sengathi ufuna ukumaka isilevu esiphindwe kabili. Unayo? Ngemuva kwalokho yenza ukuphindaphinda okuningi futhi uzobona ushintsho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukuzivocavoca » Ukuzivocavoca nokunwebeka kwentamo